Qolof dhul - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Qolof dhul)
Qolofta Dhulka () waa lakabka ugu sareeya jidhka dhulka, midaas oo ka kooban dhagaxaan, caro iyo macdano kale. Qolofka sare ee dhulku oo ah maqaarka dunida waa mid aad u adag oo heerkulkeedu markuu ugu hooseeyo gaadho 184 K ama −89.2 °C ugu badnaan wuxuu gaadhaa 56.7 °C ama 330 K.
2 Shaxda Iskudhiska
Xadiga curiyeyaasha iyo isku dhisyada macdantu weey ku kala badan yihiin oogada dhulka waxaaney u kala baxaan sidan:csilica (SiO2) waa 60.2%; alumina (Al2O3) waa 15.2%; Nuurad (CaO) waa 5.5%; magnesiya (MgO) 3.1%; Aayron(II)Ogsaydh (FeO) waa 3.8%; sodhiyam Ogsaydh (Na2O) waa 3.0%; Botashiyaam Ogsaydh (K2O) waa qadar dhan 2.8%; Aayron (III) Ogsaydh (Fe2O3) waa 2.5%; Biyo (H2O) ku dhexjira caroda waa 1.4%; Kaarboon-labo-Ogsaydh (CO2) waa 1.2%; Tiitaniyaam-labo-Ogsaydh (TiO2) waa qadar dhan 0.7%; iyo Fosforos-pentOgsaydh (P2O2) oo ah qadar dhan 0.2%.
Isku-xidhka curiyeyaashan waxay noqonayaan 99.6% qolofta sare ee dhulka, tirada yar ee kale waa hawooyin iyo neefo ku dhex jira.
Xadiga Isku Dhiska Curiye & Macdanta Qolofka Dhulka
silica (SiO2) 60.2%
alumina (Al2O3) 15.2%
Nuurad (CaO) 5.5%
magnesiya (MgO) 3.1%
Aayron(II)Ogsaydh (FeO) 3.8%
sodhiyam Ogsaydh (Na2O) 3.0%
Botashiyaam Ogsaydh (K2O) 2.8%
Aayron (III) Ogsaydh (Fe2O3) 2.5%
Biyo (H2O) 1.4%
Tiitaniyaam-labo-Ogsaydh (TiO2) 0.7%
Fosforos-pentOgsaydh (P2O2) 0.2%
Lakabka Dhexe e Dhulka
Qolofta kore ee Dhulka waa Qolofta kore ee Dhulka. qoloft dhulka waxee ka koobantahay 13 caleemaha dhulka, waa 13
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qolof_Dhul&oldid=170810"